गोरेलाई यस्तो हालतमा पुर्‍याईयो सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग: एमकेको सुराक खोज्न बिशेष केरकार...
काठमाडौं । सुन तस्करीकाका मुख्य अभियुक्त भनिएका चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ लगानीकर्ता भुजुङ गुरुङ र छिरिङ वाङ्गदेललाई मंगलबार सम्पति सुद्धिकरण विभागमा उपस्थित गराईएको छ।
उनीहरुलाई सोमबार जिल्ला अदालत मोरङबाट काठमाडौँ ल्याईएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वराज पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिको म्याद सकिन मात्र २ दिन बाँकि रहँदा उनीहरुलाई मंगलबार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उपस्थित गराईएको हो।
मंगलबार कडा सुरक्षा प्रवन्धसहित विभाग पुर्याईएका ३ जनासँग बयान लिईएको छ। अब सुद्धिकरणले उनीहरुको सम्पति छानबिन गरी बिगो तिराउने छ। यदि उनीहरुले बिगो स्वरुपको रकम तिर्न नसके अब सुन तस्करीसहित शुद्धिकरणको मुद्दामा पनि सजाय थप हुनेछ।
एमकेबारे सुराक खोजीको लागि केरकार
मंगलबार छानबिन समितिले सुन तस्करीको मुख्य लगानीकर्ता एमके भनिने मोहनकुमार अग्रवालको सुराक पत्ता लगाउन अभियुक्त गोरे, भुजुङ र छिरिङलाई फेरी केरकार गर्ने भएको छ।
समितिले दुई दिन पहिले मात्र अग्रवालको घरमा चपा मरेको थियो। सो क्रममा केहि महत्वपूर्ण कागजात हात परेको छानबिन समितिले तिनै प्रमाणहरुका आधारमा उनीहरुको संलग्नता रहेको स्पष्ट पुष्टी भएसँगै मगलबार पनि पुन: केरकार गर्ने मनस्थितिमा समिति पुगेको हो।
यसअघि यी तिनै जनाले अग्रवालसँगको सम्बन्ध खासै खुलाएका थिएनन्।
प्रकाशित : मङ्गलबार, जेठ २९, २०७५१५:३१
रहेनन्, दोस्रो विश्वयुद्ध समेत लडेका योद्धा, वरिष्ठ कलाकार भीमबहादुर थापा !
मोदी फर्केको भोलि पल्टै गोवद्र्धन मठका शंकराचार्य निश्चलानन्द काठमाडौँमा
‘स्मार्ट’ लाइसेन्समा अस्पष्टता ! न नाम बुझिन्छ, न आफ्नै तस्विर चिनिन्छ !
आफँैले अध्यापन गराउने बालिकामाथि अप्राकृतिक मैथुन गर्ने प्रधानाध्यापक थुनामा
गुट्खा खाँदा ३५ वर्षीय युवाकको मृत्यु !